त्रिभुवन विमानस्थल तल सुरुङमार्ग निर्माण हुने - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
त्रिभुवन विमानस्थल तल सुरुङमार्ग निर्माण हुने
बैशाख १७, २०७५ 2930 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
सरकारले कोटेश्वरको ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमुनि सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्ग निर्माण समावेश गरिनेछ ।
कोटेश्वर–जडिबुटी खण्ड सर्भिस ट्रयाक नहुँदा चर्को ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । विपी र अरनिको राजमार्ग हुँदै दैनिक ७ हजारभन्दा बढी सवारी कोटेश्वर हुँदै आवतजावत गर्ने गर्छन् । यसो हुँदा उपत्यकाको सवारी आवागमन अस्तव्यस्त हुने गरेको छ ।
२ वर्षअघि सरकारले तीनकुने–सूर्यविनायक सडक ६ लेनमा विस्तार गरे पनि अहिले यसले सवारीको चाप थेग्न सकेको छैन । कोटेश्वरमा अधिक जाम हुँदा सर्वसाधारण यात्रुमात्र होइन एम्बुलेन्स गुड्ने वातावरणसमेत बिग्रेको छ ।
यस्तो सवारी जाम व्यवस्थापन गर्नकै लागि सुरुङमार्ग निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले अहिले तीनकुनेस्थित मुनिभैरवबाट जडिबुटी हुँदै मनहरा खोला पारि जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माण गर्न अध्ययन सुरु गरेको छ ।
तीनकुनेदेखि जडिबुटीसम्म अण्डरपास निर्माण गर्न अध्ययन सुरु गरिएको सडक विभाग वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख सञ्जय श्रेष्ठले ऊर्जा खबरलाई बताए । ‘अण्डरपास निर्माण गर्ने गरी अध्ययन भइरहेकाले छिट्टै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गरेर निर्माण सुरु हुनेछ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार अण्डरपास निर्माणको लागि जापानले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कोटेश्वर–मुनिभैरवदेखि विमानस्थलमुनि हुँदै पेप्सीकोलासम्म वैकल्पिक सुरुङमार्ग निर्माण भए ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुनेछ ।